Nagu saabsan | Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co., Ltd.
Zhejiang Jinhuan Chain Manufacturing Co., Ltd. waxaa la aasaasay Oktoobar 1993, waa xirfadle R & D iyo silsilad wax soo saar ganacsi. Warshadu waxay daboolaysaa aag guud oo dhan 20000 mitir murabac ah, oo leh hanti go'an oo ka badan 30 milyan yuan, in ka badan 200 nooc oo qalab ah, in ka badan 100 shaqaale ah iyo karti wax soo saar sanadle ah oo ka badan 10 milyan oo mitir. Noocyada "Jinhuan" iyo silsiladaha "Jinhong" ee ay soo saarto warshaduhu waxay qaataan heerarka qaranka (GB) iyo heerarka caalamiga ah (ISO). Badeecada ayaa si fiican u iibisa dalka oo dhan waxaana loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya, Koonfurta Ameerika, Afrika iyo gobollada kale.
Wax soo saarka ugu weyn ee warshaddu waa silsilado silsilad a iyo B ah, silsilado mootooyin, silsilado isdabajoog ah iyo kuwa aan caadi ahayn, silsilado saxan, silsilado mashiinnada beeraha iyo silsilado kala duwan oo gaar ah. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay maalgashanaysay lacag, iyadoo ku tiirsan horumarka sayniska iyo teknolojiyadda, iyadoo la dardar-gelinayo horumarinta silsilado sarre oo xoog badan, isla markaana si joogto ah u daboolaya baahiyaha suuqyada gudaha iyo dibadda.
Maamulka cilmiga sayniska oo horumarsan
In geeddi-socodka ah ee hirgelinta nidaamka tayada ISO9000, shirkadaha ayaa si tartiib tartiib ah u sameeyay dokumentiyada nidaamka maaraynta tayada sayniska, aasaasay nidaamka xakamaynta tayada nidaamka oo dhan oo diiradda saaraya ka hortagga, sameeyay farsamada ee horumar joogto ah iyo wareegga suubban, iyo si joogto ah loo hagaajiyay tayada wax soo saarka. Warshadu waxay leedahay qalab dhameystiran, tikniyoolajiyad casri ah, nidaam maareyn tayo fiican leh iyo tijaabooyin dhameystiran. Qeyb ka mid ah khadadka wax soo saarka, habab cusub iyo teknoolojiyad cusub oo heer sare ah oo gudaha iyo dibedda ah ayaa la soo saaray ama loo dhisay si isdaba-joog ah, oo ay ku jiraan mesh belt mesh soo-saarista daaweynta kuleylka joogtada ah, leexinta gawaarida gaaska gawaarida, khadka wax soo saarka carbonitriding, xarigga wax soo saarka fosfateynta silsiladda. xariijin, silsilad saxan oo fiiqan iyo silsilad sawir hore ah.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula wadaagno wadashaqeyn muddo-dheer ah qariibnimo illaa caan ahaansho, laga bilaabo isbarasho ilaa aaminaad .——— William
Mootooyin silsilad lagu wado, Chain Rullaluistemadka Sax, Silsilad wadista mootada, Mooto Baaskiil wadista midig, silsiladda wadista mootada ugu fiican, Silsilado Gawaarida Gawaarida Gaaban,